विराट बने भारतीय टीमको कप्तान - Everest Dainik - News from Nepal
विराट बने भारतीय टीमको कप्तान
काठमाडौं, पुस २३ । भारतको क्रिकेट टीममा विराट कोहोरीले कप्टानी सम्हाल्ने भएका छन् । महेन्द्रसिह धोनीले एकदिवसीयको कप्तानीबाट राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा विराटले कप्टानी सम्हाल्ने भएका हुन् ।
भारतीय क्रिकेट बोर्डले विराटलाई टि–२० को पनि कप्तान नियुक्त गरिएपछि तीन वटै भर्सनको कप्तानी उनले सम्हाल्ने भएका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस भारत भर्सेस वेष्ट इन्डिजः विराटसँगै तीन खेलाडीको शतक !
विराटले जनवरी १५ देखि इङ्ल्यान्डविरुद्ध शुरु हुने एकदिवसीय र टि–२० को नेतृत्व सम्हाल्ने छन् ।
एकदिवसीय र टि–२० मा विराट कप्तान नियुक्त भएपछि पूर्व कप्तान धोनी भने टोलीमा समावेश रहनेछन् ।
त्यस्तै, तीन वर्षपछि युवराज सिंह फेरि टोलीमा फर्किएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस फेरि विराट नै पहिलो स्थानमा ! १० भित्र पर्न सफल अरु को-को ? [नाम र अंक]
ट्याग्स: birat koholi, cricket captian